China Magnetic Wireless Power Bank PBW01 စက်ရုံနှင့် ပေးသွင်းသူများ |Lantaisi
သံလိုက်ကြိုးမဲ့ Power Bank PBW01
၎င်းသည် သံလိုက်ကြိုးမဲ့ပါဝါဘဏ်ဖြစ်ပြီး စွမ်းရည်မှာ 5000 mAh (စိတ်ကြိုက် 10000 mAh)၊ 1* Type-C ပေါက်သည် 18W၊ 1* USB သည် 18W၊ ကြိုးမဲ့သံလိုက် 15W ဖြစ်သည်။
တင်ပို့မှု ::15W (ကြိုးမဲ့) + 18W (USB)
Asaway to finest meet up with client's wants, all of our operations are strictly performed inline with our motto "High Quality, Aggressive Price, Fast Service" for 100% Original China နောက်ဆုံးထွက်ဒီဇိုင်း Portable Slim Magnetic Battery Pack Wireless Charging Power Bank 5000mA iPhone 13/12 အတွက် Magsaf၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းများကို စိတ်ဝင်စားပါက သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူမှုကို စစ်ဆေးလိုပါက၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်ရန် အမှန်တကယ် အားမနာသင့်ပါ။မကြာမီကာလအတွင်း ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ ဖောက်သည်အသစ်များနှင့် သာယာဝပြောသော အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နေပါသည်။
1. [စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပြီး လုံခြုံမှုရှိသော ပါဝါဘဏ်]- အရည်အသွေးမြင့် 5000mAh သို့မဟုတ် 10000mAh Li-polymer electric core ပါသော နောက်ဆုံးပေါ်ကြိုးမဲ့ပါဝါဘဏ်သည် သင့်ဖုန်းကို အနည်းဆုံး 4~6 ကြိမ်အားသွင်းနိုင်သည်၊ တပ်ဆင်ထားသည့် အသိဉာဏ်ချစ်ပ်သည် သင့်စက်ပစ္စည်းများကို အားပိုလျှံခြင်း၊ လျှံထွက်ခြင်း၊ အလွန်အကျွံလျှပ်စီးစီးကြောင်းများ၊ တိုတောင်းသောဆားကစ်များ သို့မဟုတ် အပူလွန်ကဲခြင်းမှ သင့်စက်ပစ္စည်းများကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ တည်ငြိမ်အားသွင်းခြင်း။
2. [15W Max ကြိုးမဲ့အားသွင်းခြင်း] - ကြိုးမဲ့အိတ်ဆောင်အားသွင်းကိရိယာသည် 5W၊ 7.5W၊10W နှင့် 15W Max ကြိုးမဲ့အမြန်အားသွင်းစနစ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ကေဘယ်ကြိုးများ မလိုအပ်ပါ၊ သင်၏ Qi-certified ဖုန်း သို့မဟုတ် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ဖျာအလယ်ဗဟိုတွင် ထားကာ သင့်ဖုန်း၏ အမြင့်ဆုံးပါဝါဖြင့် အလွယ်တကူ အားသွင်းပါ။[3mm အထူအတွင်း ဖုန်းကာဗာ]
3. [ပြင်းထန်သောစွမ်းဆောင်ရည်]- 5,000mAh စွမ်းရည်၊ iPhone အမြန်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ် 7.5W၊ Android အမြန်ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ် 15W၊ USB-C 18W၊ Type-C 18W တို့ပါရှိသည်။
4. [အဆင်ပြေ] - အားမသွင်းမီ ဘေးဘက်ရှိ "Power On Button" ကို နှိပ်ရန် မမေ့ပါနှင့်၊ အားသွင်းစဉ်တွင် ကေဘယ်ကြိုးများ မလိုအပ်ပါ။LED ပါဝါညွှန်ကိန်းများသည် ကျန်ရှိသောဘက်ထရီပမာဏကိုပြသသည်၊ ဘောင်းဘီအိတ်ကပ်ထဲတွင် ထည့်ထားနိုင်သည်၊ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။
ယခင်- OEM/ODM China China China 15W Smart Sensor အလိုအလျောက် Clamping Car Mount Wireless Car Charger
နောက်တစ်ခု: စက်ရုံစျေးနှုန်း တရုတ် 1000mAh သံလိုက်ပါဝါဘဏ် Degradable Emergency Charger
15~30 မီလီမီတာ အကွာအဝေး ကြိုးမဲ့အားသွင်းကိရိယာ LW01
Desktop အမျိုးအစား Wireless Charger AW01
Stand Type Wireless Charger SW12